Kunezici eziningi okufanele uzicabangele lapho ukhetha izwe lokuba yisakhamuzi ngokutshala imali. Siqambe ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ukufanisa izifiso zabo bonke abafuna ukufaka izicelo. Kusuka kuzingxenyekazi zethu ezine zokutshala imali eziyingqayizivele, kuya kunqolobane yethu yaminyaka yonke yabatshalizimali abasezingeni eliphakeme, kuya ekuzibandakanyeni kwethu kwamasiko okuthokozisayo, sikumema ukuthi ujabulele impilo nokuchuma nathi.
Izindleko zokutshala imali eSaint Lucia ngenhloso yokuthola ubuzwe zibekiwe ukuthi zizolingana nezinhlelo ezifanayo. Abafakizicelo banokukhethwa kwezinketho ezine ezisukela enanini lotshalo-mali lwama-US $ 100,000 kuya kuma-US $ 3,500,000 kumfakisicelo oyedwa. Abafakizicelo nabo kulindeleke ukuthi bakhokhe imali yokucubungula neyokuphatha ehlotshaniswa nesicelo sabo.